အသင်းဝင် | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
အဆိုပါIAC® join နဲ့ Master နည်းပြမှကျူးလွန်နည်းပြ၏, တိုးတက်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့အတွက်သော့ချက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖန်တီးနေတဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်နည်းပြ၏အသိအမှတ်ပြုမှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းအောင်မြင်မှုပြုစုပျိုးထောင်။
တစ်ဦးအနည်းကိန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏သင်ရိုးကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင် Creating ။
မိမိကိုယ္ကို ထိေရာက္စြာဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ ပံုရိပ္လကၡဏာ
ကျနော်တို့ session တစ်ခုသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ပြီးဆုံးသည့်အခါနည်းပြပြီးဆုံးကြောင်းမယုံကြည်ကြဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပံ့ပိုးမှုနှင့်နည်းပြ session တစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘယ်သို့သောအားဖြင့်နှိုးဆွပေး - ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်နည်းပြ၏တန်ခိုးကိုအစိုးရသောအစိတျအပိုငျးအစည်းအဝေးများအကြားပေါ်ပေါက်ဆက်လက်သောအသွင်ပြောင်း၌တည်ရှိ၏ဆင်နွှဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံလက်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများ "နည်းပြအောင်လက်မှတ်" အစီအစဉ်များ၏ရှုပ်ပွနေအောင်ကမ်ဘာပျေါတှငျထူးခြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်နည်းပြအလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုသိမ်းသွင်း, ဒါမှမဟုတ်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနည်းပြနာရီခန့်လိုအပ်နိုင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးနာရီအတွင်းအစုတခုအရေအတွက်ကမလိုအပ်ပါဘူး။ IAC ® လက်မှတ်နည်းပြများနှင့်နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ၏သရုပ်ပြတစ်ခုနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။
အဆိုပါပိတ်ပင် join ဖို့လိုလားသူတွေကိုအဘို့နှင့်ချက်ချင်း Mastery Practitioner သတ်မှတ်ရေးလိုက်စားစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ($ 97 Save)
တစ်ခုမှာအွန်လိုင်းစမ်းသပ် ($ 97)
တဦးတည်း Mastery Practitioner ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (MPDP - $ 150)
($ 97 Save)
သာမန္ထက္ ထူးျခားေသာ အလင္းျပျခင္း၏ ရလဒ္ကိုဖန္တီးေပးသည္။
, အဘယ်စတိုင်၌သင်တို့ကိုနည်းပြ masterfully နည်းပြအလုပ်ကိုမှချည်ထားသောမဟုတ်ဘယ်မှာဘယ်လို, အဘယ်သူသည်။ အဆိုပါပိတ်ပင် Mastery® စိတ်ထဲ၌ဤအတူနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Mastery® တစ်ခုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနည်းပြတျကြောကျသို့မဟုတ်အခြေခံအုတ်မြစ်ကျွမ်းကျင်မှုအစုတခုဖြစ်ကြ၏ အထင်ကြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း။ ဤရွေ့ကားကျွမ်းကျင်မှုပန်းတိုင် client ကိုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ, ယဉ်ကျေးမှုအသင့်မြတ်လျော်ကန်အသတ်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ, လုပ်ပိုင်ခွင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပေးရှိရာနီးပါးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
2003, ထိုပိတ်ပင်ကတည်းက® နည်းပြတစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာလက်မှတ်, အများဆုံးတိုးတက်သောနှင့်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းပြ၏ဖွင့်ထားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အမြင့်ဆုံး, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စီးပွားရေးစံချိန်စံညွှန်းများမှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် clients များနည်းပြ၏အကြိုးစီးပှားတိုးစိတ်ဝင်စား 25,000 နည်းပြကျော်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
သင်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းချင်နှင့်စိတ်ဝင်စားပါနဲ့ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစရန္ အဆိုပါ Mastery Practitioner (အမတ်) သတ်မှတ်ရေး?
ထိုအခါသင်သည်၏အထူးစျေးနှုန်းမှာလျှော့ "အမတ်" အထုပ်ယ်ယူနိုင်ပါသည် အမေရိကန် $ 319.
တဦးတည်းနှစ်ပတ်လည်အသင်းဝင် (အမေရိကန် $ 169)
တစ်ခုမှာအွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှု (အမေရိကန် $ 97)
တဦးတည်း Mastery Practitioner ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (MPDP - အမေရိကန် $ 150)
အထုပ်တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုကမ်းလှမ်း ထိုအရာမ်ားမွ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇) ကို သက္သာေအာင္ျပင္ဆင္ထားသည္။.
MPကမ္းလွမ္းခ်က္ကို၀ယ္ယူျပီးပါက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအရာမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာအတြင္းျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ႏွစ္စဥ္အဖြဲ႕၀င္ေၾကးကို ထိုကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ယခု Mastery Practitioner အထုပ်ဝယ်ယူရန်